ianao eto: Home endrika Treatments Ho-ho an'ny blondes amin'ny maso volontany
Volontany maso sy ny hazavana voajanahary loko ny volo - dia fahita firy sy tsy mahazatra. Izany no antony makiazy ny blondes amin'ny maso volontany miavaka amin'ny endri-javatra tsy manam-paharoa sasany, fa, fa ny mahahafakely rehetra izany dia mamela anao hamorona samy hafa tanteraka sy mahatalanjona sary, ohatra, mahafatifaty endriky ny Marilyn Monroe, hentitra raharaha ramatoa, mahamenatra schoolgirl, mahafinaritra antoko ankizivavy, mpikomy mpikomy, ary ny maro hafa. Ny zava-dehibe indrindra amin'ity tranga ity - ny hisafidy ny tsara loko faritra,, izay ho mifanaraka amin'ny Hazel maso sy ny lokon'ny volo.
Endri-javatra makiazy ny volontany maso blondes
Atombohy ny fototra, izany hoe, ny toe-ny hoditra. curls blondes, indrindra rehefa platinina alokaloka, taratra hazavana tsara, toy izany, mianjera face, Ny tara-masoandro nisongadina na dia ny kely indrindra tsy lavorary. Mandritra izany fotoana izany mifanohitra loko mainty volo maso, ankapobeny, hanasongadinana ny ketrona eo amin'ny hoditra misy, manasongadina maizina toerana ambanin'ny lids sy ny fatiantoka hafa blond hatsarana.
Na izany aza, miaraka amin'ny zava-manahirana rehetra ireo dia azo mandresy miaraka amin'ny fanampian'ny araka ny tokony ho voafantina proofreaders sy tonal loharanon-karena. Izany dia mitaky ny mahafantatra, fa ny voajanahary mazava ao amin'ny mangatsiaka hatsatra hoditra feo mijery tsara kokoa, sy ny tara-masoandro - mafana matoatoa va no, afaka tsara hanamafisana ny voajanahary maso lalina. Miezaka ny mitady afovoany teo anelanelan'i ny mafana sy ny mangatsiaka hues, ankapobeny, hiteraka vokany ratsy.
Koa aza adino, fa ny fanosotra loko fototra dia tokony ho tena akaiky voajanahary hoditra feo. Afaka mampiasa ny fototry ny tarika iray maivana hoditra, fa tsy mihoatra noho, maizina, ary isaky ny fialofana, Izany dia ny hifidy ny fototra, izay dia ho kely hoditra feo, fa izany no zava-dehibe ny nanazava mampiasa faritra mpananatra teo imason'ny.
marina makiazy ny blondes amin'ny maso volontany - Ny fitambaran'ny ny paiso, sôkôla, kafe, ary koa ny fasika sy beige matoatoa va no. Mba hahatonga ny indrindra ny maso sy ny vaovao, mila mampiasa hazavana maro matoatoa, Nohamafisin'i andalana fitomboan'ny eyelashes aloky vitsivitsy matoatoa va no mainty. Izany dia ho fahadisoana lehibe ny mampiasa favoring volomboasary na mavo matoatoa va ny aloka, izay manome ny mijery reraka sy farofy. Fanandramana rehetra matoatoa va ny hafa dia afaka ny ho tena azo antoka.